Khadadka Mawduuca Emailka Moobaylka Oo Muujinaya | Martech Zone
Iyadoo mobilada oo dhaafaya desktop-ka e-maylka qiimaha furan, waxaan galabta ku sameynayay cilmi baaris ku saabsan dhererka la arki karo ee khadadka maaddada qalabka gacanta. Khadadka mowduucyada ayaa sida caadiga ah ka muhiimsan kan ka kooban e-maylka laftiisa markay tahay habdhaqanka akhristaha iyo inay furayaan emaylka iyo in kale.
Hadda imaylka ugu badani wuxuu ku furan yahay aaladda moobaylka, ka tirada jilayaasha waxaad ku haysataa iPhone, Android, Windows ama aaladda Blackberry aad ayey u gaaban tahay… oo u dhaxeysa kaliya 33 iyo 44 xaraf. Mawduuceena halkan here Khadka Mowduuca Mowjadaha Soo Bandhigaya wuxuu ku yimaadaa kaliya 34 xaraf Taasi maahan wax badan oo qol ah si kor loogu qaado xiisaha akhristahayaga oo aan u furno - taas oo caqabad ku ah suuqleyda emailka.
Tani infographic ka soo gudbinta Mass wuxuu faahfaahinayaa cilmi-baarista ku saabsan tusmada mawduuca emaylka ee aaladaha moobaylka.
Tags: dhererka khadka maadada androiddhererka khadka maadada blackberrydroid dhererka line maadoiphone 4 mawduuca mawduucaiphone 4 dhererka khadka maaddadaiphone 5 mawduuca mawduucaiphone 5 dhererka khadka maaddadakhadka maadada iphonedhererka khadka maadada iphoneemaylka gacantadhererka khadka maadadawindows mowduuca mawduucawindows windows dhererka safka mawduuca
Casharka.ly: Codsiga Baridda iyo Barashada